Ukuthuthukiswa kwe-e-commerce ye-Intanethi kwenza izinkampani eziningi ze-hose hoop zancintisana ukuthola "isitimela esisheshayo" se-e-commerce, futhi abakhiqizi be-hose hoop basukumela umthelela we-e-commerce ngezinzuzo zabo ezihlukile, izinkampani ze-hose hoop kuthuthukiswa iziteshi eziku-inthanethi Ngalesi sikhathi, kuyadingeka ukuqinisa ngokuqhubekayo ukwakhiwa kweziteshi ezingaxhunyiwe ku-inthanethi, ukuze umenzi ngamunye aqhubeke nokukhula kwezikhathi, ukuze amabhizinisi akwazi ukuqhubekela phambili.
Izimbambo zensimbi ezingenasici zensimbi zenziwa ngensimbi esezingeni eliphakeme, futhi inqubo yokukhiqiza ilungile. Ngemuva kokushiya ifektri, bahlolwa amasheke amaningi aqinile. Ziphephile futhi zithembekile futhi zinamandla aqinile wokulwa nokugqwala futhi zihlala isikhathi eside kakhulu. Umkhiqizo unokubukeka okuhle, ukusebenza okulula, i-torque ephezulu yamahhala ne-torque ephelele. Umphetho we-hamp clamp ubushelelezi futhi awulimazi i-hose. Isikulufa sibushelelezi futhi i-hamp clamp ingaphinde isetshenziswe. Ngakho-ke, i-hose clamp yensimbi engenasici isetshenziselwa ikakhulukazi ukuxhumana kwamapayipi anzima futhi athambile, futhi isetshenziswa kabanzi ekubonakaleni kwamafutha, insimbi ne-hoses e-liquid kumishini ehlukahlukene yemishini efana nezimoto, ogandaganda, imikhumbi, izinjini zikaphethiloli, izinjini zedizili, izifafaza, nokwakhiwa kwezakhiwo Ukuxhumeka kwendle, njll, kungokuqala kuzo zonke izinhlobo zokuxhuma kwe-hose.
Izindlela zokufaka eziningana ze-hose clamps
Indlela yokufaka efanele: I-hamp clamp kufanele ifakwe ngokusho kwenani le-torque enconywe ngumenzi.
Indlela yokufaka engalungile
1. Yize i-hamp clamp nayo ingahle iguqulwe ngenani elifanelekile le-torque, ukuhlanganiswa okuhlanganayo kusebenza ngaphansi kwengcindezi, okuzokwenza ukuthi i-hamp clamp iwele emaphethelweni we-hose futhi ekugcineni ibangele ukuba i-hose ivuze.
2. Yize i-hamp clamp nayo ingasontwa ibe ngumzuzu ofanele, ukwanda kwe-hose kanye nokudlidliza kwendawo kuzophoqa i-hamp clamp ukuthi ihambe, ibangele ukuthi i-hose ivuze.
3. Yize i-hamp clamp nayo ingaqiniswa, ukunwebeka, ukuqhekeka nokudlidliza kwendawo ye-hose kuzodala ukuthi udonga lwe-hose lubhekane namandla okusika, futhi kuzolimaza namandla we-hose. Izimbambo ze-hose ziyaqhubeka nokudlidliza futhi ekugcineni zibangele ukuba i-hose ivuze.